Pane Chimwe Chinhu Chatinofanira Kuzvikudza Nacho Here? Batsira Vana Kuti Vazive Chinonzi Kuzvikudza Kwakanyanya
KUZVIKUDZA zvinorevei? Ungandiudza here?— Heuno muenzaniso. Wati wamboedza kuita chimwe chinhu chausinganyatsogona here? Zvimwe wakaedza kukava bhora. Kana kuti zvimwe wakaedza kutamba fishi-fishi, mutambo uya unotambwa uchisvetuka tambo. Pane mumwe munhu here akamboti, “Maiweeee! Ini ndinozvigona kupfuura iwe”?— Munhu iyeye akanga ari kuzvikudza.
Unonzwa sei vamwe pavanodaro? Zvinokufadza here?— Saka unofunga kuti vamwe vanonzwa sei kana ukazvikudza?— Kuratidza mutsa here kuudza mumwe munhu kuti, “Ndiri nani panewe”?— Jehovha anoda vanhu vanoita izvozvo here?—
Mudzidzisi Mukuru aiziva vanhu vaifunga kuti vaiva nani pane vamwe. Vaizvikudza, kana kuti kuzvitutumadza nokutarisira vamwe vose pasi. Saka rimwe zuva Jesu akavaudza imwe nyaya kuti avaratidze kuti zvakanga zvakaipa sei kuti vazvikudze. Ngatinzwe nyaya yacho.
Nyaya yacho iri pamusoro pomumwe muFarisi nomumwe muteresi. VaFarisi vakanga vari vadzidzisi vechitendero, avo kazhinji vaiita sokunge vakanga vakanaka kana kuti vatsvene kupfuura vamwe vanhu. MuFarisi womunyaya yaJesu akaenda kutembere yaMwari yaiva muJerusarema kunonyengetera.
Nei Mwari akafarira muteresi, asi kwete muFarisi?
Jesu akati muteresi akaendawo kutembere kunonyengetera. Vanhu vazhinji vakanga vasingafariri vateresi. Vaifunga kuti vateresi vaiedza kuvabiridzira. Uye ichokwadi kuti vateresi vazhinji vakanga vasina kutendeseka dzimwe nguva.
MuFarisi akatanga kunyengetera kuna Mwari ari patembere, seizvi: ‘Haiwa Mwari, ndinokuongai kuti handisi mutadzi sevamwe vanhu. Handibiridziri vanhu kana kuita zvimwe zvinhu zvakaipa. Handina kuita somuteresi uyo ari apo. Ndiri munhu akanaka. Ndinopedza mazuva maviri pavhiki ndisina kudya kuitira kuti ndive nenguva yakawanda yokufunga nezvenyu. Uye ndinoendesa kutembere chinhu chimwe chete pazvinhu gumi zvose zvandinowana.’ MuFarisi aifunga kuti zvechokwadi aiva nani pane vamwe, handitika?— Uye akatoudzawo Mwari kudaro.
Asi muteresi akanga asina kudaro. Haana kana kusimudza musoro wake kutarisa kudenga paainyengetera. Akaramba akamira kure akakotamisa musoro wake. Muteresi akanga achizvidemba zvikuru pamusoro pezvivi zvake, uye akazvirova pachipfuva neshungu. Haana kuedza kuudza Mwari kuti akanga akanaka zvakadini. Asi akanyengetera achiti: ‘Haiwa Mwari, ivai nomutsa neni mutadzi.’
Unofunga ndiani aifadza Mwari pavarume vaviri ava? Akanga ari muFarisi here, uyo aifunga kuti akanga akanaka zvikuru? Kana kuti akanga ari muteresi, uyo akanga achizvidemba pamusoro pezvivi zvake?—
Jesu akati muteresi ndiye akafadza Mwari. Nei? Jesu akatsanangura kuti: ‘Nokuti munhu wose anoedza kuita kuti zviratidzike sokuti ari nani kupfuura vamwe vanhu achaderedzwa. Asi uyo akaderera mumeso ake achakwidziridzwa.’—Ruka 18:9-14.
Jesu akanga achidzidzisa chidzidzo chei munyaya yake?— Akanga ari kudzidzisa kuti hazvina kunaka kufunga kuti tiri nani pane vamwe. Tingasataura kuti tinofunga kuti tiri nani, asi nezviito zvedu, tingaratidza kuti tinofunga kuti tiri nani. Wati wambozviita here?— Funga nezvomuapostora Petro.
Jesu paakataurira vaapostora vake kuti vose vaizomusiya paaizosungwa, Petro akazvikudza achiti: ‘Kana vamwe vose vakakusiyai, ini handizombofi ndakadaro!’ Asi Petro akanga akarasika. Akanga achinyanya kuzvivimba. Akasiya Jesu. Zvisinei, akazodzoka, sezvatichadzidza muchitsauko 30 chemubhuku rino.—Mateu 26:31-33.
Ngatitorei muenzaniso wemazuva ano. Zvimwe iwe nomumwe waunodzidza naye muri kubvunzwa mimwe mibvunzo kuchikoro. Zvakadini kana uchigona kupa mhinduro dzacho pakarepo, asi mumwe mudzidzi asingagoni? Chokwadi, unofara paunenge uchiziva mhinduro. Asi zvingava zvakanaka here kuzvienzanisa nomumwe anononoka kupindura?— Zvakanaka here kuedza kuzviita kuti uratidzike zvakanaka nokunyadzisa mumwe munhu?—
Izvozvo ndizvo zvakaitwa nomuFarisi. Akazvikudza achiti akanga ari nani pane muteresi. Asi Mudzidzisi Mukuru akati zvakaitwa nomuFarisi zvakanga zvisina kunaka. Ichokwadi kuti mumwe munhu angakwanisa kuita chimwe chinhu zviri nani kupfuura zvingaita mumwe. Asi izvozvo hazvirevi hazvo kuti iye munhu ari nani chaizvo.
Zvinokuita munhu ari nani here kana uchiziva kupfuura mumwe munhu?
Naizvozvo kana tichiziva kupfuura mumwe munhu, ichocho chikonzero chakanaka chokuzvikudza here?— Pafunge. Tisu takagadzira uropi hwedu here?— Aiwa, Mwari ndiye akapa mumwe nomumwe wedu uropi. Uye zvinhu zvizhinji zvezvatinoziva, takazvidzidza kune mumwe munhu. Zvichida takazviverenga mune rimwe bhuku. Kana kuti zvimwe mumwe munhu akatiudza nezvazvo. Kunyange kana tikaziva chimwe chinhu toga, tinenge tachiziva sei?— Ndizvozvo, nokushandisa uropi hwatakapiwa naMwari.
Munhu paanoedza kuita zvinhu nemwoyo wake wose, chinhu chakanaka ndechokuti utaure chimwe chinhu chinomuita kuti afare. Muudze kuti unofarira zvaaita. Zvimwe unogona kutomubatsira kuti aite zviri nani. Waisazoda here kuti vanhu vakuitire izvozvo?—
Nei zvisina kunaka kuzvikudza kana takasimba kupfuura mumwe munhu?
Vamwe vanhu vakasimba kupfuura vamwe. Zvakadini kana wakasimba kupfuura munin’ina kana hanzvadzi yako? Ichocho chikonzero chokuti uzvikudze here?— Aiwa, hachisi. Zvatinodya ndizvo zvinotibatsira kuti tikure takasimba. Uye Mwari anopa chiedza chezuva nemvura nezvimwe zvose zvinodiwa zvinoita kuti zvokudya zvikure, haadaro here?— Saka ndiMwari watinofanira kutenda kana takasimba.—Mabasa 14:16, 17.
Pane mumwe wedu anofarira kunzwa mumwe munhu achizvikudza here?— Ngatiyeuke mashoko aJesu okuti: ‘Sezvaunoda kuti vamwe vanhu vakuitire, uvaitirewo saizvozvo.’ Kana tikadaro, hatizombofanani nomuFarisi aizvikudza munyaya yakataurwa noMudzidzisi Mukuru.—Ruka 6:31.
Pane imwe nguva mumwe munhu akambodana Jesu kuti Mudzidzisi akanaka. Mudzidzisi Mukuru akati here, ‘Hungu, ndakanaka’?— Aiwa, haana kudaro. Asi akati: “Hapana munhu akanaka, kunze kwomumwe chete, Mwari.” (Mako 10:18) Kunyange zvazvo Mudzidzisi Mukuru akanga akakwana, haana kuzvikudza. Asi akaita kuti kurumbidzwa kwose kuende kuna Baba vake, Jehovha.
Saka, pane watinogona kudada naye here?— Hungu, aripo. Tinogona kudada noMusiki wedu, Jehovha Mwari. Patinoona runako rwezuva parinenge rava kunyura kana kuti chimwe chisikwa chinoshamisa, tinogona kutaurira mumwe munhu kuti, ‘Mwari wedu anoshamisa Jehovha, akaita izvi!’ Ngatigare takagadzirira kutaura nezvezvinhu zvikuru izvo Jehovha akatoita nezvaachaita munguva yemberi.
Mukomana uyu ari kudada nei?
Verenga zvinotaura Magwaro pamusoro pokuzvikudza, kana kuti kudada, wodzidza kuti tinofanira kurega sei kuzvikudza: Zvirevo 16:5, 18; Jeremiya 9:23, 24; 1 VaKorinde 4:7; 13:4.
Jesu aiita zvinhu izvi zvisere muupenyu hwake paaiva pasi pano.